Shuruudaha Abaalmarinta Gabayga Gabdhaha Da'yarta ah sannadka 2019 ee BBC Soomaali - BBC News Somali
Shuruudaha Abaalmarinta Gabayga Gabdhaha Da'yarta ah sannadka 2019 ee BBC Soomaali
20 Maajo 2019
Image caption Shugri Jama Ibraahim ayaa ku guuleysatay abaalmarinta gabayga gabdhaha ee 2018-kii
Laanta afka Soomaaliga ee BBC waxay raadinaysaa gabdha ugu gabay wanaagsan Soomaalida sannadka 2019-ka,
Xogta shaqsiyadeed ee aad soo gudbisay waxa ay BBC-da u isticmaali doontaa hawsha abaalmarintan oo keliya. BBC-da waxay xogtaada u isticmaali doontaa si waafaqsan habka sharciga ah ee hay'ad warbaahineed ahaan u adeegsan karto soo saarista wararka, iyo halabuurka oo ay ka mid tahay tahay dhiirragalinta dadka leh hibooyinka naadirka ah. Hanaanka internetka loo adeegsado soo gudbinta abaalmarinta ayaa waxaa martigalinaya shirkad kale oo BBC-da wakiil ka ah, waxaana lagu magacaabaa Monterosa. Xogtaada gaarka ah la lama wadaagi doono dhinac kale adiga oo aanan ogolaansho lagaa helin marka hore. Hase yeeshee dadka laga soo dhex xushay tartamayaasha ayaa la soo daabici doonaa magacyadooda iyo halka ay ku noolyihiin, waxaana lagu barbar qori doonaa xogta qofka guuleystay iyo kuwa ku xigo.
Dhammaan xogta shaqsiyadeed waxaa lagu kaydin doonaa meel dhowrsoon, waana la tirtiri doonaa isla habeenka la qabto xafladda abaalmarinta lagu shaacinayo, taas oo lagu qaban doono magaalada Djibouti, ee Jamhuuriyadda Djibouti 18-ka, Luuliyo, 2019. Haddii aad wax su'aal ka qabtid qaabka loo maamulay xogtaada, fadlan kusoo hagaaji cinwaanka ah lynn.kariuki@bbc.co.uk . Xogta Guuleystayaasha iyo dadka kaalimaha xiga ayaa la kaydin doonaa muddo labo sano ah sababo la xiriira maamulka. Haddii aad u baahan tahay macluumaad dheeri ah oo la xiriira qaabka loo keydinayo xogtaada shaqasiga ah. Haddii aad u baahatid inaad ka baxdid tartanka markaad codsiga soo dirsatid kaddib, fadlan la xiriir lynn.kariuki@bbc.co.uk. Haddi aad u baahatid macluumaad dheeri ah oo ku aadan sida ay BBC-da u keydiso xogtaada, halkan ayaad ka heli kartaa siyaasadda xaqdhowrka xogta shakhsiga ah. Haddii aadan ku qanacsanayn siyaasaddeenna ku aadan qaabka u keydinayno xogtaada gaarka ah, fadlan waxaad la xiriiri kartaa waaxda ICO ee qaabilsan arrinkaas.
Halkan ka akhriso shuruudaha.
1. Abaalmarintan waxey u furan tahay dhammaan dumarka ku hadla Afka Soomaaliga ee da'doodu u dhaxeyso 16 ilaa iyo 35 sano jir, (laga bilaabo 16-ka May ilaa iyo 15-ka Juunyo, 2019-ka).
2. Dadka ka qeyb qalaya tartankan waa in aaney kamid ahayn shaqaalaha BBC-da, shirkadaha xiriirka la leh hey'adda, ama qaraabadooda dhaw. Waxaa laga yaabaa in lagaa codsado cadeyn la xiriirta da'daada, aqoonsiga iyo buuxinta shuruudaha lagama maarmaanka ah.
3. Ka qeyb galayaasha tartanka waxaa looga baahan yahay inay soo gudbiyaan gabay. Gabaygu waa inuusan ka badan 15 sadar, akhrintiisana isku celi celis ahaan waa inuusan ka badanin hal daqiiqo.
4. Tartanka wuxuu furmayaa 16 May saacada marka ay tahay 11 GMT, oo u dhiganta 2-da duhurnimo saacadda geeska Afrika. Dhammaan ka qeybgalayaasha waa inay soo diraan gabayadooda email-ka tartanka.gabayga@bbc.co.uk amaba waxay ku soo gudbin karaan foomka codsiga, kaas oo laga heli karo barta BBC-da http://www.bbc.com/somali, amaba codsiga lagu hagaajiyaa emaylka-ka:
Dhammaan codsiyadu waa in ay wehliyaan gabayga, iyo faah faahin ku saabsan:
Da'da (sannadka dhalashada)
E-mailkaaga iyo deegaanka aad ku sugan tahay.
5. Lama oggola in dalabka lagu soo gudbiyo qaab aan ahayn kan kor ku xusan.
6. Ka qeybgalayaasha waa inay codsiyadooda ugu dambeyn soo gudbiyaan saacaddu marka ay tahay 23:59 GMT maalinta Khamiista ah ee ay taariikhdu ku beegan tahay 15-ka June, 2019-ka.
Codsiyada lasoo gudbiyo wixii ka danbeeya waqtiga aan xusnay lama tixgelin doono. Codsiyada mar kale laguma celin doono daka soo gudbiyay, sidaa darteed fadlan xusuusnow inaad la hartid nuqul kamid ah gabaygaaga.
7. Ka qeybgaluhu hal mar oo keliya ayuu codsigiisa soo gudbin karaa, kuwa kale lama qiimeyn doono, oo waxaa laga soo qaadi doonaa waxba kama jiraan. Codsigaada lama tixgelin doono haddii ay da'daadu ka yar tahay 16 sano, ama aad ka weyn tahay 36 sano jir. BBC-du waxay xaq u leedahay inay caddeyn dheeri ah kaa codsato haddii uu shaki yimaado.
8. Waa in gabayadu aysan ahayn wax ku saabsan sharaf dhaawac, meel kadhac/ceebeyn, anshax xumo, xadgudub ama aanay ka koobneyn ereyo aan munaasab ahayn.
9. Gabayadu waa iney noqdaan kuwo munaasab u ah in laga baahiyo BBC-da. Gabayadu waa inay noqdaan kuwo qofka soo gudibinaaya uu leeyahay, si aaney dhicin in la baahiyo gabayo qof kale, taas oo meel ka dhac ku ah xuquuqda hal-abuurka. BBC-du ma aqbali doonto mas'uuliyadda dhibaatada ka dhalata xuquuqda lahaanshaha haddii uu ka qeyb galuhu ka dhaga adeeygo u hoggaan samidda shuruucda, sidoo kale BBC-du mas'uul kama noqon doonto cabasho kasta oo ka timaada cid kale oo la xiriita xadgudub kasta oo ay gaystaan ka qeyb-galayaasha.
10. Gabayada waxaa lagu qiimeyn doonaa shuruudahan soo socda:
Tayada luqadda, quruxda, akhrinta, iyo asal ahaanshaha.
Ilaalinta xeerarka iyo dhismaha gabayga, marka la eego misaanka iyo qaafiyadda.
Xiisaha fariinta la gudbinayo iyo saameynteeda.
11. Gabayada waxaa lagu kala xukmin doonaa hannaankan soo socda:
Dhammaan gabayada waxaa dib u eegis ku sameyn doona qof ka tirsan shaqaalaha BBC-da, kaas oo magacyada ka saari doono gabayada, oo iyagoo magac la'aan ah u gudbin doona qof kale oo shaqaale ah, kaas oo oo xuli doono qoraallada buuxiya shuruudaha aasaasiga u ah gabayada (qofkan waxaa uu mari doonaa tababar ah inuusan dhinac u xaglinin)
Qoraallada oo magacyada laga saaray ayaa loo gudbin doonaa guddi garsoorayaal ah.
Guddiga garsoorayaasha ayaa xuli doona gabayga ugu wanaagsan iyo labada ku xiga.
12. Dadka guuleystay waxaa lasoo xiriiri doona ruux kamid ah hawl wadeenada barnaamijkan Abaalmarinta gabayada ee hablaha da'da yar ee laanta Af Soomaaliga ee BBC, ugu dambeyn Talaadada 11-ka Luulyo, 2019.
13. Abaalmarinta waxey noqoneysaa in hawada laga akhriyo gabayga gabdhaha guuleystay iyo iyo lacag dhan 600 GBP, kaalinta koobaad, 500 GBP kaalinta labaad iyo 400 GBP kaalinta saddexaad.
14. Dadka guuleystay abaal marintooda ayaa lagu wareejin doonaa, ama waxaa loo sii marin doonaa bangiga hadii aysan immaan karin xafladda lagu shaacin doono dadka guuleystay 18-ka July 2019.
15. Ka qeybgalayaashu(ama cidda mas'uulka ka ah hadii uu qofku ka yaryahay 18 sano) waxay u oggolaadeen BBC-da in ay gabygoodu u adeegsato warbixinnada la xiriirta abaalmarinta oo lagu baahin karo baraha ay BBC-da maamusho.
16. Dadka ku guuleysta ma ahan inay ka hadlaan guushooda iyagoon oggolaansho qoraal ah ka haysan BBC-da. Haddii ay ka hadlaan iyagoon oggolaansho haysan waxay horseedi kartaa in lagala noqda abaalmarinta ama dib u eegis lagu sameeyo.
17. BBC-du ma aqbali doonto mas'uuliyadda codsiyada soo daaha ama la waayo iyadoo ay ugu wacantahay hannaaka lagu soo gudbinayo dalabka ee emaylada. Cadeynta gudbinta farriinta ee ay soo saaraan kombiyuutarrada macnaheedu ma a'han in farriinta gaarayso halkii loogu tala galey. BBC-da ma aqbali doonto mas'uuliyadda wax alle iyo wixii cilad farsamo, shaqeyn la'aan ama dhibaato kale ah, taasoo keenta in codsigii lasoo gudbiyey uu lumo ama aan si hagaagsan loo diiwaan gelin.
18. BBC-du waxey xaq u leedahay iney joojiso hab socodka abaal marinta, ama ay wax ka badasho shuruudaha, haddii loo arko iney lagama maarmaan tahay, ama ay soo baxaan duruufo ka baxsan awooddeeda.
19. Codsiga ka qeyb-galayaasha iyo waalidiintooda, hadii loo baahdo, wuxuu muujinayaa inay oggolaadeen inay si sharci ah uga qeyb-qaataan abaalmarintan, oo ayna aqbaleen shuruudahan abaalmarinta.
20. Xeerarkan waxaa lagu dhaqi doonaa shuruucda u dagsan England iyo Wales.
21. Illaa iyo xad, shuruucdan waxey waafaqsan yihiin xeerarka u dagsan tartamada iyo codbixinta BBC-da, taasood halkan ka daalacan kartaan: ttp://www.bbc.co.uk/editorialguidelines/guidelines/appendix2